छोड्नका लागि कारणहरू - 802०२ क्विट्स
घर » Vermonters » छोड्ने कारणहरू
राम्रोको लागि बाहिर निस्कन कारणहरू
धूम्रपान, भाप वा अन्य सुर्तीजन्य उत्पादनहरू छोड्न उत्तम कारण के हो? छोड्नुका थुप्रै कारणहरू छन्। ती सबै राम्रा छन्। र तपाईं एक्लो हुनुहुन्न।
तपाईं र तपाईंको बच्चाको लागि धूम्रपान र अन्य सुर्ती छोड्ने नि: शुल्क अनुकुल सहायता पाउनुहोस्।
तपाईंको स्वास्थ्य सुधार गर्नुहोस्
धुम्रपान वा अन्य सुर्तीजन्य उत्पादनहरू छोड्नका लागि त्यहाँ धेरै कारणहरू छन्। केवल सिगरेट, ई-सिगरेट वा अन्य सुर्ती छोड्नाले तपाईको स्वास्थ्यलाई सुधार गर्दछ, यसले तपाईलाई राम्रो महसुस गर्न र व्यायाम जस्ता अन्य स्वस्थ बानीहरूमा संलग्न हुन बढी ऊर्जा दिन मद्दत गर्दछ।
जबकि धेरै व्यक्तिहरु उनीहरु छोडे पछि वजन बढावाको बारेमा चिन्तित छन्, तर यो धूम्रपान वा अन्य सुर्तिजन्य छोड्ने सबै फाइदाहरुलाई ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ र छोड्नुपर्दा तपाईको स्वास्थ्यको लागि कत्ति धेरै गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने धुम्रपान सम्पूर्ण शरीरलाई असर गर्दछ, तपाईंको सम्पूर्ण शरीर लाभ।
यदि तपाईं तौल बढाउने बारे चिन्तित हुनुहुन्छ, वा तपाईंको चाहना रोक्न के खानको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ केहि सुझावहरू छन् जुन तपाईंलाई वजन बढाउनबाट बचाउन र तपाईंको स्वास्थ्य सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ!
स्वास्थ्य खाद्य संग तपाईंको शरीर पौष्टिक
याद गर्नुहोस् कि यो आफैलाई केहि अस्वीकार गर्ने बारे होईन - यो तपाईंको शरीरलाई खुवाउने बारेमा हो जुन यसको उत्तमतम हुनु आवश्यक छ। स्वस्थ खानाले केवल वजन बढाउन रोक्न मद्दत गर्दैन, ती स्वादिष्ट हुन सक्छ! 1 2
फलफूल र तरकारीहरू धेरै खानुहोस्।
तपाईको खाना र स्वस्थ खाजाको योजना बनाउनुहोस् ताकि तपाईले वास्तवमै कहिल्यै भोकाउनु हुँदैन। (तपाईं भोकाउनु भएकोले अस्वास्थ्यकर खानाहरू पक्रन यो सजिलो छ।)
स्वस्थ नाश्ताहरूको सूचीको साथ आउँनुहोस् जुन तपाईं रमाइलो गर्नुहुन्छ (उदाहरणका लागि, सूर्यमुखी बीउहरू, फलहरू, बकबक पपकोर्न, चीजको साथ अखण्ड ग्रेन क्र्याकरहरू, बदाम बटरको साथ अजवाइन स्टिक)।
धेरै पानी र पेय सीमाहरू जस्तै मदिरा, चिनी जुस र सोडा जस्ता क्यालोरीहरूको साथ।
तपाईको भाग आकारहरू हेर्नुहोस्। स्वस्थ भोजन प्लेट2 तल आफ्नो भाग आकार योजना गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
आधा तपाईको खाना खाने प्लेटमा फलफूल वा तरकारीहरू राख्नु हो, प्लेटको १/। पातलो प्रोटिन (जस्तै, कुखुरा, पकाएको माछा, चिली) र १/1 प्लेट एक स्वस्थ कार्ब जस्तो मिठो आलु वा खैरो चामल हुन।
यदि तपाईंसँग "मीठो दाँत" छ भने मिठाई एक दिनमा एक पटक सीमित गर्नुहोस् र डेजर्टको आकार सीमित गर्नुहोस् (उदाहरणका लागि आधा कप आइसक्रीम, आधा कप पागल सुक्खा फलको साथ मिश्रित र डार्क चकलेट चिप्स, o औंस। ग्रीक दही १ सँग। ताजा फलको टुक्रा, गाढा चकलेटको २ वर्ग)। "स्वस्थ मिठाई विचारहरु" को लागी इन्टरनेट खोज्नुहोस्।
हरेक दिन चालकको साथ तपाईंको शरीरलाई पुरस्कृत गर्नुहोस्
शारीरिक गतिविधि, जस्तै हिड्ने, बागवानी / यार्डवर्क, बाइक चलाउने, नाच्ने, भार उठाउने, shoveling, क्रस कन्ट्री स्कीइ snow, स्नोशोइ,, धेरै तरीकामा मद्दत गर्दछ1:
तपाइँको मुडलाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ
वजन बढाउनबाट रोक्न मद्दत गर्दछ
मधुमेह रोक्नको लागि चिनीको स्तर तल राख्छ (वा मधुमेह नियन्त्रणमा राख्नुहोस्)
शरीरलाई बलियो बनाउँदछ
तपाईका हड्डीहरू र जोड़हरू स्वस्थ राख्दछ
एक दिनको एक घण्टा सम्म नपुगुञ्जेल तपाईले पहिले नै के गर्दछ त्यसमा extra अतिरिक्त मिनेटको शारीरिक गतिविधि थप्नको लक्ष्य सेट गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, शारीरिक गतिविधि केहि पनि हुन सक्छ जुन तपाइँ पसिना काम गर्न पर्याप्त सार्न बनाउँछ।
क्रियाकलापहरू छनौट गर्नुहोस् अरूले खानेकुरामा लडाइँ गर्न मद्दत पुर्‍याउँछन्।
सुर्तीजन्य, विशेष गरी धुम्रपान प्रयोग गर्ने हात-मुखको बानीलाई सुर्तीजन्य पदार्थको रूपमा छोडिदिन गाह्रो हुन सक्छ। यो हात-देखि-मुख बानी पूरा गर्न खानाको साथ सिगरेट, ई-सिगरेट वा वापिंग पेन प्रतिस्थापन गर्न लोभ्याउने छ। केही व्यक्ति जसले सुर्तिजन्य पदार्थ प्रयोग गर्छन् उनीहरूलाई पराल वा चिनी-मुक्त गममा चबाउन सहयोगी हुन्छन्, वा तिनीहरूको हात समात्न केहि नयाँ काम गर्दछन्।
केहि थप पाउन्ड प्राप्त गर्ने चिन्ता छोड्नुबाट निरुत्साहित पार्नुहोस्। छोड्दा तपाई केवल तपाईको जीवनमा वर्ष थप्नको लागि मात्र कदम चाल्नुहुन्न, तपाईले आफ्नो जीवनको गुणस्तर सुधार गर्नु हुन्छ र तपाईका वरिपरिका मानिसहरूलाई पनि दोस्रो धुवाँबाट सुरक्षित राख्नु हुन्छ। यदि तपाईं वजन बढाउन चिन्तित हुनुहुन्छ भने आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
यहाँ वजन थप्न वा स्वस्थ वजन कायम गर्न केही थप संसाधनहरू छन्:
CDC: स्वस्थ तौल
सीडीसी: स्वस्थ तौलको लागि स्वस्थ भोजन
तपाईंको परिवारको लागि
सुर्तीजन्य धुँवा तपाईको घरका सबैको लागि अस्वास्थ्यकर हुन्छ। तर यो विशेष गरी बच्चाहरूका लागि हानिकारक छ जसको फोक्साहरू अझै विकास भइरहेका छन् र दम, क्यान्सर, सीओपीडी र हृदय रोग भएका व्यक्तिहरूका लागि। वास्तवमा, धूम्रपान र दोस्रो धुवाँको जोखिम सबैभन्दा सामान्य र गम्भीर दम ट्रिगर मध्ये एक हो।
अमेरिकी सर्जन जनरल भन्छन् त्यहाँ छ no जोखिम-मुक्त स्तर दोस्रो धुवाँको जोखिमको। कसैको लागि, दोस्रो धुवाँको वरिपरि हुनु जस्तै उनीहरु पनि धुम्रपान गरिरहेका छन्। यहाँ सम्म कि धुम्रपानको छोटो एक्सपोजरले तत्काल हानिकारक प्रभावहरू पुर्‍याउँछ, जस्तै मुटु रोग, स्ट्रोक, मधुमेह र फोक्सोको क्यान्सरको बढेको जोखिम।
सबै तरिकाहरू दोस्रो सेकंड धुम्रपान खराब हो तपाईंको लागि र तपाईंको माया पाएका सबैलाई हेर्नुहोस्।
बच्चाहरू र बच्चाहरूको सानो फोक्सो हुन्छ जुन अझै बढ्दै छ। उनीहरूसँग सेकेन्डहिड धुवाँको विषबाट पनि ठूलो जोखिम छ।
जब बच्चाहरू धुवाँमा सास फेर्छन्, यसले स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ जुन उनीहरूको सम्पूर्ण जीवन उनीहरूसँगै रहन्छ। यसमा दम, ब्रोन्काइटिस, निमोनिया, बारम्बार कान संक्रमण र एलर्जी जस्ता समस्याहरू पर्दछन्।
वयस्कहरूका लागि जो दम, एलर्जी वा ब्रोन्काइटिसबाट पीडित छन्, दोस्रो धुवाँले लक्षणहरूलाई अझ खराब बनाउँछ।
बच्चाहरू जसका आमा बुबा वा हेरचाहकर्ताहरूले धुम्रपान गर्छन् अचानक शिशु मृत्यु सिन्ड्रोम (SIDS) बाट दुई पटक मर्ने सम्भावना हुन्छ।
धुम्रपान रहित घरमा बस्ने घरपालुवा जनावरहरू भन्दा सेकेन्ड धुम्रपान गर्ने घरपालुवा जनावरहरूमा बढी एलर्जी, क्यान्सर र फोक्सोको समस्या हुन्छ।
तम्बाकूको धुँवामा अनैच्छिक एक्स्पोजरको स्वास्थ्य नतिजा: सर्जन जनरलको रिपोर्ट।
तपाईंको परिवारले तपाईंलाई सिगरेट, ई-सिगरेट वा अन्य सुर्तीजन्य पदार्थहरू छोड्न मद्दत पुर्‍याउँछ। तिनीहरूलाई तपाईंको उत्साहजनक प्रयासहरूमा प्रोत्साहित र समर्थन गर्न दिनुहोस्।
म मेरा daughters छोरीहरू, श्रीमान् वा दुई नातिनातिनाहरू लाई मलाई एउटा भयानक रोगको कारणले गर्दा मर्दै गरेको देख्दिन। तीस दिनसम्म सिगरेट र धेरै दिनको बाँच्ने दिन! म खुशी हुन सक्दिन। 🙂
बिरामीको निदान पाउँदा एक डरलाग्दो वेक अप कल हुन सक्छ जसले तपाईंलाई धूम्रपान वा अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ छोड्नको लागि पहिलो कदम चाल्न प्रेरित गर्दछ। चाहे छोड्नाले तपाईंको रोगलाई सुधार गर्न सक्दछ वा तपाईंको लक्षणहरूलाई राम्रोसँग प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ, स्वास्थ्य सुविधाहरू दूरगामी हुन सक्दछन्।
जब मैले १ years बर्ष अघि छोडेँ, यो पहिलो पटक थिएन कि मैले छोड्ने प्रयास गरें, तर यो अन्तिम र अन्तिम समय हो। भर्खर क्रोनिक ब्रोन्काइटिस र प्रारम्भिक चरण एम्फाइसेमा पत्ता लाग्यो, मलाई थाहा थियो त्यो मेरो अन्तिम चेतावनी हो। मैले महसुस गरे कि म कति भाग्यमानी छु कि मलाई भनिएको थिएन मलाई फोक्सोको क्यान्सर छ।
बच्चाको स्वास्थ्य लाई सुरक्षित गर्नुहोस्
यदि तपाईं वा तपाईंको पार्टनर गर्भवती हुनुहुन्छ वा गर्भावस्थालाई विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, अब धूम्रपान त्याग्न उत्तम समय हो। गर्भवती हुनु अघि, गर्भवती भएको बेला वा पछि धूम्रपान त्याग्नु नै उत्तम हो उपहार तपाई आफैंलाई र बच्चालाई दिन सक्नुहुन्छ.
गर्भ तुहुने सम्भावनालाई कम गर्दछ
धूम्रपान नगरेको १ दिन पछि पनि तपाईंको बच्चालाई थप अक्सीजन दिन्छ
कम जोखिम पैदा गर्दछ कि तपाइँको बच्चा चाँडै नै जन्मिनेछ
तपाईंको बच्चा तपाईंको साथ अस्पतालबाट घर आउने संभावनालाई सुधार गर्दछ
शिशुहरूमा सास फेर्ने समस्याहरू, घरघर घराउँने र बिरामी कम गर्दछ
अचानक शिशु मृत्यु सिन्ड्रोम (SIDS), कान संक्रमण, दम, ब्रोन्काइटिस र निमोनियाको जोखिम कम गर्दछ।
तपाईंको स्वास्थ्य पनि तपाईंको बच्चाको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईको स्तन दुध स्वस्थ हुनेछ
तपाईको लुगा, कपाल र घर राम्रो बास्ना आउँछ
तपाईंको खाना राम्रो स्वाद हुनेछ
तपाईंसँग अधिक पैसा हुनेछ जुन तपाईं अन्य चीजहरूमा खर्च गर्न सक्नुहुनेछ
तपाईलाई मुटु रोग, स्ट्रोक, फोक्सोको क्यान्सर, जीर्ण फोक्सोको रोग र अन्य धुम्रपान सम्बन्धी रोगहरू हुने सम्भावना कम हुन्छ
धूम्रपान वा अन्य सुर्तिजन्य छोड्न र कमाउनको लागि निःशुल्क अनुकूलित मद्दत प्राप्त गर्नुहोस् उपहार कार्ड पुरस्कार! कल गर्नुहोस् १-1००-अहिले नै विशेष प्रशिक्षित गर्भावस्था छोड्ने कोचसँग काम गर्न र तपाईं आफ्नो गर्भावस्थाको बखत र पछाडि प्रत्येक पूर्ण परामर्श कल ($ २$० सम्म) को लागी $ २० वा $ gift० उपहार कार्ड कमाउन सक्नुहुन्छ। अधिक जान्नुहोस् र पुरस्कार कमाउन शुरू गर्नुहोस्.
हराएको प्रियजनको सम्मान गर्नुहोस्
धूम्रपान त्याग्नको लागि प्रियजनको हराउनु महत्त्वपूर्ण प्रेरणा हो। भर्मन्ट वरपरका अन्यले प्रियजनको जीवनलाई सम्मान गर्न छाडेका छन्।
मेरा बुबा सबै धूम्रपान सम्बन्धी स्वास्थ्य मुद्दाहरूको कारण मर्नुभयो। मेरी आमा अझै जीवित छ, तर उनको धूम्रपानको कारण खुला हृदय शल्यक्रिया गरेको छ। दुर्भाग्यवश, मसँग धूम्रपान सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याहरू पनि छन्: अस्टियोपोरोसिस, मेरो भोकल तार र सीओपीडीमा पोलीप्स। यो मेरो पहिलो दिन हो, र म वास्तवमै राम्रो र बलियो महसुस गर्छु। मलाई थाहा छ म यो गर्न सक्दछु। मलाई थाहा छ म यो गर्न योग्य छु।
मिल्स पोष्ट गर्नुहोस्
जब तपाईं धुम्रपान, वाफिंग वा अन्य सुर्तीजन्य पदार्थहरू छोड्नुहुन्छ, यो केवल तपाईंको स्वास्थ्य मात्र हो जुन तपाईं बचत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईं सिगरेट वा ई-सिगरेट, चबाई सुर्ती, सुंघ वा वाफिंग आपूर्तिमा पैसा खर्च नगर्दा तपाईं के गर्न सक्नुहुनेछ भनेर देखेर तपाईं चकित हुनुहुनेछ।
म एक दिन प्याक पिउँथे, जुन धेरै महँगो भइरहेको थियो। त्यसोभए जब मैले छोडिदिएँ, मैले मेरो भान्साको भाँडोमा $ $ दिन राख्न शुरू गरें। म अहिले months महिनाको लागि छुट्टिएको छु, त्यसैले मैले परिवर्तनको एक राम्रो राम्रो हिस्सा प्राप्त गरें। यदि मैले यसलाई एक बर्षमा छोड्ने बनाएको छु भने, म मेरी छोरीलाई पैसाको साथ छुट्टीमा लैजान्छु।
पहिलो कदम चाल्न तयार हुनुहुन्छ?
802०२ क्विट्सको साथ आज अनुकूलित छोड्ने योजना सिर्जना गर्नुहोस्!
मद्दत यहाँ छ>